नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्नेभन्दा कहिलेकाही पिउनेलाई स्वास्थ्यमा असर - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्नेभन्दा कहिलेकाही पिउनेलाई स्वास्थ्यमा असर
नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्नेभन्दा कहिलेकाही पिउनेलाई स्वास्थ्यमा असर
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७६ कात्तिक ५ गते, ११:२५ मा प्रकाशित
के तपाई नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ ? कि कहिलेकाही विशेष अवसरमा मात्र पिउनुहुन्छ ? यदि तपाई कहिलेकाहीँ पिउनुहुन्छ र धेरै पिउनुहुन्छ भने तपाईंलाई अन्य पियक्कडलाई भन्दा स्वास्थ्यमा बढी असर गर्छ । युरोपेली हृदयरोग चिकित्सक समाजद्वारा प्रकाशित ‘इपी युरोपेस’ले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता तथा कोरियाली विश्वविद्यालयका डा जोङ द्वितीय चोइले मादक पदार्थको सेवनको मात्रा र नियमिततालाई केन्द्रित गरेर अध्ययन गरिएको जानकारी दिए । मादक पदार्थ थोरै तर नियमित सेवन गर्नेभन्दा कहिले काही धेरै सेवन गर्नेलाई बढी असर गर्ने गरेको पाइएको अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।
अनियमित सेवनले मुटुमा धेरै असर गरेर मुटुसम्वन्धी समस्याहरू बढी समस्या देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार अनियमितताले मुटुको धडकन बढ्ने, नाडीको रफ्तारलाई बढाउने, स्याँ स्याँ हुने, धेरै थकाई लाग्ने, छाती दुख्ने र चक्कर लाग्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् ।
अध्ययनकर्ताहरुले यो सर्वेक्षणमा ९७ लाख ७६ हजार ९ सय ५६ जनालाई सहभागी गराएका थिए । सन् २००९ देखि सुरु भएको अध्ययन सन् २०१७ सम्म चलेको थियो ।
मानिसलाई गर्ने क्षतिमा मादक पदार्थको कुल मात्रा वा मादक पदार्थ सेवनको कुल सङ्ख्यामध्ये कुन कुराले मुख्य भूमिका खेल्छ भन्ने दावी गर्न नसकिने अध्ययनको बिश्लेषण छ ।